मानन्धरकाे राजीनामाले वामदेवको मुहारमा चमक, भने- ‘नतमस्तक छु कमरेड रामवीर’ – Everest Dainik – News from Nepal
मानन्धरकाे राजीनामाले वामदेवको मुहारमा चमक, भने- ‘नतमस्तक छु कमरेड रामवीर’
काठमाडौं, असोज २४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता बामदेव गौतम काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट चुनाव लड्ने अब चाहिँ पक्का भइसकेको छ । धेरै जिल्लामा नजर लगाएका गौतम अन्तिममा काठमाडौंबाटै चुनाव लड्ने भएका हुन् ।
चुनाव लड्नका लागि उनको नजर डोल्पा, प्युठान हुँदाहुँदा सुदूरपश्चिमको बैतडी पुगेको खबर यसअघि सार्वजनिक भएका थिए । तर, त्यहाँका नेकपा नेताहरुले राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि बामदेव दिक्क भएका थिए ।
उनी चौरैबाट हार खाएर अक के गर्नेहोला त भन्ने मनस्थितीमा पुगका थिए । तर, हठात् उनको मुहारमा चमक छर्न आइपुगे काठमाडौं सातबाट निर्वाचीत नेकपाका सांसद रामबीर मानन्धर !
जब रविले बामदेवका लागि राजीनामा दिदैछु भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे सायद नेता गौतमको खुट्टा भइमा थिएनन् होला । यसैको उदाहरण हो- बामदेवले आफ्नो व्यक्तिगत पेजमा राखेको रामबीरप्रतिको धन्यवादका शब्दगुच्छा ! नेता गौतमले मानन्धरलाई यतिसम्म भनेकि नतमस्तक छु कमरेड रामबीर मानन्धर
बामदेवले अरु केके भने मानन्धरले राजीनामा घोषणा गरेपछि हेर्नुस्
तपाईले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन अभिब्यक्ति दिनुभयो त्यो बिचार ले मेरो कद अझ उचो बनाएको छ । संगठनका लागि हामी दुवै जना सिपाही हो । भोलीका दिनमा संगठनले मलाई दिने भूमिका र तपाईले गरेको त्याग प्रति आँच आउन दिने छैन ।
पार्टीको गरिमालाई उचो राख्न र तपाईले म प्रति देखाउनुभएको विश्वासलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । पार्टीले हामीलाई भुमिका र जिम्मेवारी जे जस्तो दिए पनी जनताको काममा संधैसँगै रहनेछौं ।
ट्याग्स: Mabdev gautam, Rambir mandandhar